နိုင်ငံတော်သီချင်း ကို Linkin Park သီချင်း နဲ့ မှားဖွင့်ခဲ့မိတဲ့ မော်လ်တာ အသင်း - SPORTS MYANMAR
နိုင်ငံတော်သီချင်း ကို Linkin Park သီချင်း နဲ့ မှားဖွင့်ခဲ့မိတဲ့ မော်လ်တာ အသင်း
ပြီးခဲ့ တဲ့ စနေနေ့ က ကစားခဲ့ တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ် ပွဲ တစ်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ် နဲ့ အယ်ဘေးနီးယား တို့ရဲ့ ပွဲ ကတော့ ကသိုင်း ကရိုင်း တွေ နဲ့ စတင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့ အကျော် အမော် Stade de France ကွင်းကြီး ထဲ မှာ ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပွဲ မစတင် မီ နိုင်ငံ တော် သီချင်း သီဆိုရာ မှာ ပွဲတာဝန်ခံ Operator ရဲ့ မှားယွင်း မှု ကြောင့် အယ်ဘေးနီးယား အသင်း ဟာ ဒေါသ အမျက် ချောင်းချောင်း ထွက်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ပွဲ အစီ အစဉ် ကို ကိုင်တွယ်သူ တွေ ဟာ အယ်ဘေးနီးယား နိုင်ငံ တော် သီချင်း အစား အန်ဒိုရာ အသင်း ရဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်း ကို မှားယွင်း ဖွင့်မိ ခဲ့တာ ကြောင့် မျက်နှာ ပျက်စရာ တွေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာ က ဒီနေရာ မှာ တင် ပြီး မသွားခဲ့ ပါဘူး ။
အစီအစဉ် ကြေညာသူ ဟာ သူတို့ရဲ့ အမှား အတွက် အမြန် ပြန်လည် တောင်းပန် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ပူ ပေါ် နှစ်ပူ ဆင့်ဆိုသလို ပဲ တောင်းပန် စကား ဆိုသူ ဟာ အယ်ဘေးနီးယား အမည် ကို အာမေးနီးယား အသင်း နဲ့ ထပ်မံ မှားယွင်း ခဲ့ပြန် ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး ၂ ကြိမ် တိုင်တိုင် အရှက်ကွဲ ခဲ့မှု အတွက် အယ်ဘေးနီးယား ကစား သမား တွေ နဲ့ အသင်း တာဝန် ရှိသူတွေ ဟာ ဒေါပွခဲ့ကြပြီး ပွဲ မကစားတော့ ဖို့ အထိ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ၀ိုင်းဝန်း ဖြန် ဖြေ မှု တွေ ကြောင့် ပွဲကို ဆက်လက် ကစားခဲ့ ပေမယ့် ဖီဖာ ကတော့ အဆိုပါ ကိစ္စ အတွက် ပြင်သစ် အသင်း ကို ဒဏ်ငွေ တပ်ဖို့ စီစဉ် နေပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံတော် သီချင်း မှားဖွင့် မိတာ ဟာ အခု အကြိမ်မှ ပထမဆုံး ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ် ပါဘူး ။ အစီအစဉ် ကို တာဝန်ယူ သူတွေ ရဲ့ ပြင်ဆင်မှု အားနည်းခြင်း တွေ ကြောင့် ဒီလို အမှားမျိုး တွေ ဟာ ရံဖန်ရံခါ မှာ ပေါ်ပေါက် လာတတ် ပါတယ် ။
ဒီအထဲ မှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ဟာ ငိုအားထက် ရယ်အား သန်စေခဲ့ ပြီး မှား အဖွင့် ခံခဲ့ ရတဲ့ သူတွေ ပင် ပြုံးစေ့စေ့ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ လည်း ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ မှားဖွင့် မိခဲ့တာ က အခြား နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း မဟုတ်ခဲ့ဘဲ နာမည်ကျော် အဆိုတော် အဖွဲ့ Linkin Park ရဲ့”Numb” သီချင်း ဖြစ်နေ ခဲ့လို့ပါ . . .
၂၀၁၄ ခုနှစ် တုန်းက မော်လ်တာ အသင်း ဟာ စလိုဗက်ကီးယား အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားဖို့ အိမ်ကွင်းမှာ သေချာ ပြင်ဆင် ခဲ့ပါတယ် ။ ပွဲထွက် ကစား သမားတွေ ၊ အရန် လူတွေ နဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဟာ နိုင်ငံတော် သီချင်း ကို အားမာန် အပြည့် နဲ့ သီဆိုဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ထားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ကြားလိုက်ရတာ ကတော့ “Numb” သီချင်း ရဲ့ အဖွင့် တေးသွား ပါပဲ ။ ဒီကိစ္စ ဟာ အမှန် တကယ် ဖြစ်ခဲ့ တာပါ ။ ဒါပေမယ့် မော်လ်တန် ကစား သမားတွေ ကတော့ စိတ်ဆိုး ဒေါသမထွက် ခဲ့ဘဲ ပြုံးစေ့စေ့ သာ ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အစီအစဉ် တာဝန်ယူသူ ကလည်း အမှား ကို အမြန်ပြင်ဆင် ခဲ့ပြီး မော်လ်တာ နိုင်ငံတော် သီချင်း ကို ပြောင်းလဲ ဖွင့် စေခဲ့ ပါတယ် ။
တကယ်လို့ တေးသွား ကို အမြန်မပိတ် ဖြစ်ခဲ့ ဘူးဆိုရင် တော့ ကွင်းထဲ မှာ “Numb” သီချင်း ကို အားရပါးရ သီဆိုနေတဲ့ မော်လ်တာ ကစား သမားတွေ ကို မြင်တွေ့ ရမလား ဆိုတာ ကတော့ . . .
နိုငျငံတျောသီခငျြး ကို Linkin Park သီခငျြး နဲ့ မှားဖှငျ့ခဲ့မိတဲ့ မျောလျတာ အသငျး
ပွီးခဲ့ တဲ့ စနနေေ့ က ကစားခဲ့ တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခွစေဈ ပှဲ တဈပှဲ ဖွဈတဲ့ ပွငျသဈ နဲ့ အယျဘေးနီးယား တို့ရဲ့ ပှဲ ကတော့ ကသိုငျး ကရိုငျး တှေ နဲ့ စတငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ပွငျသဈ နိုငျငံရဲ့ အကြျော အမျော Stade de France ကှငျးကွီး ထဲ မှာ ယှဉျပွိုငျ ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပှဲ မစတငျ မီ နိုငျငံ တျော သီခငျြး သီဆိုရာ မှာ ပှဲတာဝနျခံ Operator ရဲ့ မှားယှငျး မှု ကွောငျ့ အယျဘေးနီးယား အသငျး ဟာ ဒေါသ အမကျြ ခြောငျးခြောငျး ထှကျခဲ့ရ ပါတယျ ။
ပှဲ အစီ အစဉျ ကို ကိုငျတှယျသူ တှေ ဟာ အယျဘေးနီးယား နိုငျငံ တျော သီခငျြး အစား အနျဒိုရာ အသငျး ရဲ့ နိုငျငံတျော သီခငျြး ကို မှားယှငျး ဖှငျ့မိ ခဲ့တာ ကွောငျ့ မကျြနှာ ပကျြစရာ တှေ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ပွဿနာ က ဒီနရော မှာ တငျ ပွီး မသှားခဲ့ ပါဘူး ။
အစီအစဉျ ကွညောသူ ဟာ သူတို့ရဲ့ အမှား အတှကျ အမွနျ ပွနျလညျ တောငျးပနျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ တဈပူ ပျေါ နှဈပူ ဆငျ့ဆိုသလို ပဲ တောငျးပနျ စကား ဆိုသူ ဟာ အယျဘေးနီးယား အမညျ ကို အာမေးနီးယား အသငျး နဲ့ ထပျမံ မှားယှငျး ခဲ့ပွနျ ပါတယျ ။
ဒီလိုမြိုး ၂ ကွိမျ တိုငျတိုငျ အရှကျကှဲ ခဲ့မှု အတှကျ အယျဘေးနီးယား ကစား သမား တှေ နဲ့ အသငျး တာဝနျ ရှိသူတှေ ဟာ ဒေါပှခဲ့ကွပွီး ပှဲ မကစားတော့ ဖို့ အထိ ဆုံးဖွတျ ခဲ့ကွပါတယျ ။ နောကျပိုငျး မှာတော့ ၀ိုငျးဝနျး ဖွနျ ဖွေ မှု တှေ ကွောငျ့ ပှဲကို ဆကျလကျ ကစားခဲ့ ပမေယျ့ ဖီဖာ ကတော့ အဆိုပါ ကိစ်စ အတှကျ ပွငျသဈ အသငျး ကို ဒဏျငှေ တပျဖို့ စီစဉျ နပွေီ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒီလိုမြိုး နိုငျငံတျော သီခငျြး မှားဖှငျ့ မိတာ ဟာ အခု အကွိမျမှ ပထမဆုံး ဖွဈခဲ့တာ မဟုတျ ပါဘူး ။ အစီအစဉျ ကို တာဝနျယူ သူတှေ ရဲ့ ပွငျဆငျမှု အားနညျးခွငျး တှေ ကွောငျ့ ဒီလို အမှားမြိုး တှေ ဟာ ရံဖနျရံခါ မှာ ပျေါပေါကျ လာတတျ ပါတယျ ။
ဒီအထဲ မှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှဈ တုနျးက ဖွဈခဲ့တဲ့ ကိစ်စ ဟာ ငိုအားထကျ ရယျအား သနျစခေဲ့ ပွီး မှား အဖှငျ့ ခံခဲ့ ရတဲ့ သူတှေ ပငျ ပွုံးစစေ့ေ့ ဖွဈခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဘာဖွဈလို့ လညျး ဆိုတော့ ဒီတဈခါ မှားဖှငျ့ မိခဲ့တာ က အခွား နိုငျငံရဲ့ နိုငျငံတျောသီခငျြး မဟုတျခဲ့ဘဲ နာမညျကြျော အဆိုတျော အဖှဲ့ Linkin Park ရဲ့”Numb” သီခငျြး ဖွဈနေ ခဲ့လို့ပါ . . .
၂၀၁၄ ခုနှဈ တုနျးက မျောလျတာ အသငျး ဟာ စလိုဗကျကီးယား အသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျ ကစားဖို့ အိမျကှငျးမှာ သခြော ပွငျဆငျ ခဲ့ပါတယျ ။ ပှဲထှကျ ကစား သမားတှေ ၊ အရနျ လူတှေ နဲ့ နညျးပွ အဖှဲ့ဝငျတှေ ဟာ နိုငျငံတျော သီခငျြး ကို အားမာနျ အပွညျ့ နဲ့ သီဆိုဖို့ အဆငျသငျ့ ပွငျထားခဲ့ ကွပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့ ကွားလိုကျရတာ ကတော့ “Numb” သီခငျြး ရဲ့ အဖှငျ့ တေးသှား ပါပဲ ။ ဒီကိစ်စ ဟာ အမှနျ တကယျ ဖွဈခဲ့ တာပါ ။ ဒါပမေယျ့ မျောလျတနျ ကစား သမားတှေ ကတော့ စိတျဆိုး ဒေါသမထှကျ ခဲ့ဘဲ ပွုံးစစေ့ေ့ သာ ဖွဈခဲ့ကွ ပါတယျ ။ အစီအစဉျ တာဝနျယူသူ ကလညျး အမှား ကို အမွနျပွငျဆငျ ခဲ့ပွီး မျောလျတာ နိုငျငံတျော သီခငျြး ကို ပွောငျးလဲ ဖှငျ့ စခေဲ့ ပါတယျ ။
တကယျလို့ တေးသှား ကို အမွနျမပိတျ ဖွဈခဲ့ ဘူးဆိုရငျ တော့ ကှငျးထဲ မှာ “Numb” သီခငျြး ကို အားရပါးရ သီဆိုနတေဲ့ မျောလျတာ ကစား သမားတှေ ကို မွငျတှေ့ ရမလား ဆိုတာ ကတော့ . . .